युवाहरुको समस्या र व्यवस्थापनमा चुनौती – Chitwan Post
नेपालमा युवाहरुको समस्या र त्यसको व्यवस्थापन हाम्रो प्रमुख मुद्दा हो । उद्देश्य र योजनाबिनाका हाम्रा एक–एक गलत कदमले देशबाट सक्षम युवाहरुलाई खोजीखोजी विदेशी भूमिमा धपाइएको छ, लखेटिएको छ ।
यहाँ किसानले खेतबारीमा छानीछानी बलिया बलिया हलगोरू नारेजस्तो भइरहेको छ । बुद्धि, क्षमता र योग्यताको उचित कदर भएको देखिने अवस्था पाइँदैन । बाघ र मृगको भोजको दौड प्रतियोगितामात्रै चलिरहेको छ । शिक्षाबाट निस्किएको दक्ष प्रतिफललाई उपयोग र परिचालन गर्न नसकिएको अवस्था छ । दक्ष प्रतिफललाई बल र सत्ताको दम्भमा नाच्न विवश पारिएको छ । बाध्य पारिएर खाडी र पश्चिमा देशको शरणमा भौँतारिन विवश बनाइएको छ । तिनैको श्रममा शुल्क लगाएर महलमा लम्पसार परिएको छ ।
हामीकहाँ नारा–भाषणको एकअर्कामा भीषण भिडन्त हुने गरेको छ । यसले तीव्र हुनुपर्ने कार्यमा समेत सुस्तता ल्याएको छ । यसको क्षति हामी सबैले महसुस गरेकै छौँ । समुचित विकास सबै क्षेत्रमा एकैनास हुनुपर्ने अवस्थामा बोल्ने स्वतन्त्रता अत्यधिक हाबी हुँदा नारा–भाषणमात्रै हाम्रा मानसपटलमा जीवन्त रहने गरेका छन् ।
काम शून्यमा कछुवाको चालमा उफ्रिरहेका छन् । राम्रा उल्लेखनीय कार्यहरु भए विकासको रस चाख्न पाइन्छ । आउने पुस्ताले पनि उक्त कार्यबाट पाठ सिक्न र सचेत हुन सक्छन् । अवस्था र समयमा परिवर्तन आउँछ । सधैँ युवाहरुमा क्षमता र अनुभवको गोटी चलेर चुरो समस्या कहिल्यै सुल्झँदैन । ठूलो लगानी गरी तयार भएको दक्ष, सक्षम युवापुस्तालाई प्रयोग र परिचालन गरी समाज र देशले अपेक्षित लाभ लिन सक्नुपर्दछ । यस्ता कुराहरुमा वृद्धि गर्ने गुणात्मक नीति लिनुपर्दछ ।
हाम्रा नियत र प्रवृत्ति खराब हुँदा त्यसको प्रतिफल विकराल समस्याका रुपमा देखिएको छ । युवा विकास, अवसर र सशक्तीकरणका लागि सबै तहका सरकार, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक समाजको सहकार्य र समन्वयमा मह¤वपूर्ण स्थान रहने गर्दछ । तर, आज यस्तो अवस्थाबाट समाज सञ्चालन भएको पाइँदैन ।
दलप्रति केन्द्रित राजनीतिक आस्था, विश्वास, सत्ता र शक्तिको आधिपत्यले सक्षम युवाहरु अझै यो देशमा उपेक्षित बनिरहेका छन् । यहाँ सक्षम युवाहरुको योग्यता र क्षमताको मूल्यांकन कसैबाट कुनै तहमा पनि भएको पाइँदैन । शक्ति र भक्ति जसमा छ उसैले मौरीको चाका चुसिरहेको छ । सक्षम र क्षमतावान् भईकन पनि युवाहरु सोर्सफोर्स र दबाबको आक्रमणले दुर्घटनाग्रस्त भएका छन् ।
युवाहरुमा देखाइएको क्षमता र अनुभवको रंगमञ्च उदांगो भई चलिरहेको छ । बोलबाला र शक्तिको प्रपञ्चमा सम्बन्धित क्षेत्रमा सक्षमता नहुँदानहुँदै आप्mनालाई काखा च्यापेर विचरण गर्न छोडिएको छ । क्षमता र सम्बन्धित क्षेत्रमा तीव्र इच्छा भएकालाई पाखा धकेलेर कसाईको युद्ध सुरू भएको छ । राम्रालाई लत्याएर अयोग्यलाई पोषण गर्दा समाज र देशको छवि योग्यताले भन्दा अयोग्यताको दुर्गन्धले बढी प्रदूषित बनिरहेको छ ।
प्रदूषणलाई सफा गर्न योग्यलाई टेक्नेसम्मको मार्ग कोट्याउनसम्म पनि दिइएको छैन । उही भुमरीमा सक्षमता घुमिरहेको छ । सक्षमता निक्र्यौल गर्न, निर्णयमा समस्या समाधान गर्ने पक्षको धारणा, जाँच परख गर्ने तहमा उचित र स्वीकार्य निर्णयको दिशामा पुग्न सकिएको छैन ।
कुनै पनि कुराको निर्णय लिँदा ठीक–बेठीक के छ त्यसको आधार र कारण देखाई निर्णय लिने व्यवस्थाको अवस्थाबाट अझै हामी पछि नै परिरहेका छौँ । सत्ता र बलको दबाबमा गर्न नहुने र गर्नै नमिल्ने कामहरु पनि सहर्ष स्वीकार गरी अवलम्बन गरिएको छ । कौशल सुनुवाइ र छिनोफानोको सफल अभ्यास भएकै पाइँदैन ।
यस्ता कुराहरुमा नागरिक समाज र सम्बन्धित निकायहरुबाट गलत कार्यलाई सही र उचित मूल्यांकन गर्न सत्यका नजिरहरु स्थापित र उदय हुन सकिरहेका छैनन् । यस्तो अवस्था निरन्तर जारी रहनुले समाज र देशमा सक्षमता तथा योग्यता भन्ने सवालहरु ओरालो लाग्दै गएका छन् । सामाजिक व्यवस्थामा कुहिरो लाग्न थालेकोले अध्ययन र अनुसन्धान नगरी हुनेखाने र सत्ताको हाबी ज्यादा हुँदा यो देशमा सक्षम जनशक्ति क्षमता भईकन पनि उपेक्षित भई पश्चिमा र खाडी मुलुकमा शरण लिनु परेको तीतो यथार्थ हाम्रासामु सर्वविदितै छ ।
काममा मेल नखाने, नपाउने र सर्वस्वीकार्य नहुने पक्षमा पनि सत्ता र बलको विशेष मलजलले गर्दा मध्यम र निम्न क्षेत्रका युवाहरु अझ प्रताडित भएको पाइन्छ । एकाधिकार प्रभुत्वमा रूमल्लिएको व्यवस्थाले कसरी समाजमा परिवर्तन आउँछ ? कसरी योग्य युवापुस्तालाई सही स्थानमा अवतरण गराउन सकिन्छ ? कानुनको शासन भएको देशमा सही निर्णय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, जिम्मेवारी र कर्तव्यको ख्याल हुनुपर्ने हो, तर संस्कारको खराब लत विराजमान भएकोले प्रवृत्ति र व्यवहारमा परिवर्तन आउनै सकेन ।
फलस्वरुप, यो विकराल युवा समस्या देखिन गयो । व्यवस्थाले दिएका नियम राम्रा भईकन पनि हाम्रा प्रवृत्तिगत व्यवहारले गर्दा कर्तव्य र दायित्व सबैमा समान हुनै सकेन । कानुनले देशका सबै नागरिक समान हुन् भनेको छ, तर हामी व्यवहारमा बल, सत्ता र भेदभावको घेराबाट माथि कहिल्यै उठ्नै सकेनौँ । अझ जाति विशेष र आरक्षणको कुरा मिसाएर समस्यालाई चरम बिन्दुमा धकेलिएको छ । हामी सबै नेपाली युवा समान छौँ, लिएको शिक्षा समान छ, सबै योग्य र सक्षमरुपमा तयार भएका छौँ भने यो, त्यो र ऊ भनेर छुट्याउन र भेदभाव गर्न आवश्यक छैन । सबै देशले मानेको मेरूदण्ड नै हुन् । यसैले बल, सत्ता र अन्य विचित्र गतिविधि, मनगढन्ते कारण देखाएर काखा र पाखा गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ । देश निर्माण र समृद्धिको पथमा सबै एकताबद्ध र समान भएर लाग्नुपर्छ । तर, यहाँ आरक्षणको अवधारणाले सीमित व्यक्ति, वर्ग, क्षेत्रमा प्रभुत्व बढिरहेको छ । सबलीकरण गर्ने पक्षलाई विकल्पका रुपमा खोजिएको छैन । समावेशीकरणले गर्दा सीमित क्षेत्रभित्रका व्यक्तिमा अवसर पर्याप्त देखिए तापनि अन्य योग्य युवा जनशक्ति वञ्चितिमा नै परेका छन् । यस्तो अवस्थाले गर्दा सक्षम युवाहरु निराश बन्न थालेका छन् । सबलीकरण गर्न नसक्ने यस्ता गलत कार्यहरु र व्यवस्थाको योग्यता प्रणालीमा ठूलो प्रश्नचिन्ह उब्जाएको देखिन्छ ।
समाज र देशमा सिर्जना भएका विविध समस्या र व्यवधानले राष्ट्रसेवाको मूल प्रवाहमा आउन र समाहित हुन नसकेका युवा सक्षम जनशक्तिलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन अर्थपूर्ण विधि नभएको हो कि, प्रयोग र परिचालन गर्न योजना र नियम नभएको हो कि नजानिएको हो वा अनुभव र क्षमता खोजिएर मूल प्रवाहमा ल्याउन कोसिस नै नगरिएको हो ! व्यापक खोज र अनुसन्धानको विषय सिर्जना भएको छ । समाज र देशको परिवर्तन र विकासका लागि युवा जनशक्तिको सहभागिता र क्षमतालाई परिचालन गर्न अर्थपूर्ण योजना, नियम र उद्देश्यका साथ अघि बढ्न अब ढिला भइसकेको छ । अविलम्ब ठोस कदमहरु चाल्न अत्यावश्यक देखिन्छ । शासन संयन्त्रमै पनि समान सहभागिता भएको देखिए तापनि व्यवहार र प्रवृत्तिमा अपनत्वको भावनाले भरिएको खराब संस्कार माथि उठ्न सकिरहेको छैन । यसको दबाबमा बोलबाला, सत्ता र शक्तिको क्षमता नभएका सक्षम युवा जनशक्ति आर्जित र तिरस्कृत भएर विभिन्न देशहरुमा शरणार्थी बन्न भौँतारिनु परेको छ । व्यवस्था राम्रो भईकन पनि हाम्रा व्यवहारमा देखिएको अवस्थामा सुधार हुन नसक्दा देशमा सक्षम युवाहरु दिनहुँ पातलिँदै गइरहेका छन् । किसानले खेतबारीमा बलिया हलगोरू नारेजस्तो भइरहेको छ स्थिति । समाज र देश थप कमजोर तथा युवाहरु कंगाल बन्ने खतराको घण्टी बजिसकेको छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा विशेष ध्यान दिन नसकी विदेशी श्रम सम्झौतामा ढोका खुलेकोमा रमाउन र खुसी हुन बाध्य हुनुले देशलाई पराधीन बनाउँदैछ । यस्ता काममा जितको अनुभूतिहरु व्यक्त गरिरहेका छौँ ।
आप्mना आँगनमा परालका भारी बिसाउनुपर्ने ठाउँमा हामी अरुका आँगनमा परालका भारी थुपार्नका लागि अहोरात्र त्यसैमा ध्यान केन्द्रित गरिहेका छौँ । अनि, कसरी देशमा युवा समस्या समाधान हुन सक्थ्यो र ! आमरुपमा नै शैक्षिक सचेतना र सशक्तीकरण गर्नु आवश्यक छ । उन्नति र समृद्धिका लागि क्षमता विकास, तालिम र सीप विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।